I-AdSense kunye nokuSebenza. I-AdSense Paradox | Iindaba zeGajethi
Ngaba ukhe wema wacinga ukuba Impumelelo yenkqubo ye-AdSense ilingana ngokuthe ngqo nenani labasebenzisi esibagxothayo kwibhlog yethu? Ewe, yile nto bendiyicinga emva kokufunda Yintoni ukusebenziseka kweWebhu? Kwaye kunjalo impendulo yam.
La Ukusetyenziswa kakuhle oko kuthetha ukuba undwendwe lwephepha lewebhu liyazi ngawo onke amaxesha apho akhoyo, indlela yokuhamba usuka kwenye indawo yewebhu uye kwelinye kwaye licandelo ngalinye lephepha lelani ngokujonga nje.
PKwinkqubo yeAdSense yokuxela izibonelelo Kuya kufuneka sifunde ukudibanisa iintengiso zethu Ngaphakathi komxholo, oku kuthetha ukuba kufuneka sikhethe imibala kunye nobukhulu obufanelekileyo ukuze iintengiso zingangqubani nomxholo wonke kwindawo leyo.
En ibhlog yeAdSense Basixelela ngeBlogtimization kwaye bona ngokwabo babonisa kwindawo yokuqala yenqaku labo ukubaluleka kokudibanisa iintengiso kwibhlog. Bacebisa ukuba sikhethe umbala ofanayo nemvelaphi yebhlog yethu njengemvelaphi yentengiso zethu, ngokunjalo ezinye izikhombisi zokudibanisa intengiso.
A Njengoko siphucula ukudityaniswa kweeyunithi zentengiso zeAdSense, intengiso kunye nomxholo ziyabhideka. Ngaloo ndlela umsebenzisi akayazi yonke le ntengiso yomxholo akazi ukuba umxholo uphela phi kwaye intengiso iqala phi. Yintoni nawuphi na umsebenzisi wamandla ayibonayo njengeebhloko zentengiso ezifakwe ngobuchule ukuphumelela CTR (inani lokucofa kwiwaka ngalinye lokuvela) Undwendwe olufunyenwe njengebhloko enye apho konke kunelisekile kwaye akazi ukuba amaxesha amaninzi ucofa indawo yentengiso.
A ukusukela ngalaa mzuzu imigaqo-siseko yokusebenziseka ayisasebenzi, kuba akukho msebenzi wenziwayo owenziweyo ukwahlula intengiso kwinto enesiqulatho, kuba oku kunganciphisa inzuzo eveliswa yintengiso yemixholo.
EIngxaki inyuka xa ifayile ye- Inani lotyelelo kwibhlog alikho likhulu kakhulu. Ewe kunjalo, isezantsi inani labasebenzisi bemihla ngemihla eyahlukileyo, ipesenti yabasebenzisi abanokucofa kwiAdSense. Oku kuguqulela kwizibonelelo ezingenangqondo ngale nkqubo yentengiso. Ibhlogger encinci yamaxesha anokuwela kumgibe wokukholelwa ukuba ukwandisa inani leentengiso kwiphepha ngalinye kuya kunyusa inzuzo yabo. Kwaye oku kunokuba yinyani kodwa kuphela phantsi kweenqobo ezithile. Into eqhelekileyo iya kuba kukuba umlinganiso awunaziphumo. Makhe sibone ukuba kutheni.
UIbhlog enotyelelo olumbalwa, nokudibanisa iibhloko zeAdSense kakuhle, ayizukufumana zibonelelo zincinci kwintengiso yemeko. Ukufumana inzuzo encinci Kuya kufuneka sonyuse ukugcwala kwindawo yethu ukuzama ngale ndlela ukwandisa inani lokucofa kwintengiso yethu.
La Indida yeAdSense Kuthetha ukuba ukufumana imali kufuneka sikhuphe kwibhlog yethu utyelelo oluye lwasibiza kakhulu ukufumana.
Pyiva lonto Kuyimpazamo ukwandisa ukudityaniswa kwentengiso kwindawo yethu xa kukho utyelelo ezimbalwa. Ibhlog enondwendwelo ezimbalwa ayinakukwazi ukuphoswa lithuba elinye lokuguqula undwendwe lube ngumfundi othembekileyo.Ukulungiselela intengiso yeemeko kuthetha ukuba siza kuphulukana nenani elithile labasebenzisi ngokulula kunokuba kuxabisile ukubatsalela kwibhlog yethu.
Pokanye elinye icala Ukukhula njengebhlog, akonelanga ukubonelela ngomxholo olungileyo, kubalulekile ukuba unxulumane nabanye beebhlogi bafunde into oyibhalayo kwaye unxibelelane nayo. Ukuba uyikhukula ibhlog yakho ngentengiso ukwenza inzuzo encinci oyenzayo, unokufumana abantu abatsha ukuba bacofe, kodwa ukuba ibhlogger ihlala emhlabeni kwibhlog yakho awuyi kuba nethuba lincinci lokutsala umdla wabo ukuba iphepha ligcwele zizibhengezo zentengiso.
SKubafundi bebhlogger awusoze wanxibelelana nebhlog yakho kwaye ngekhe banxibelelanise umxholo wakho kwezinye iisayithi. Ngenxa yoko i-PageRank yakho ayisoze yande kwaye Ngaphandle kokuba uyisilungisi sokwenza injini yokukhangela Kuya kufuneka uhlawulele i "Umsila omfutshane" ("umsila omfutshane"). Oko kukuthi, uyakufumana kuphela utyelelo ngokusebenzisa imixokelelwane ethe ngqo kunye nengafakwanga rhoqo, uphulukana namathuba okuqala ukondla kulayini omde (Umsila omde) yezigidi zophando olungakhuphisaniyo olwenziwa mihla le kwi-Intanethi. Nangeyiphi ndlela, ngaphandle kwePageRank kuya kufuneka ulibale malunga nokuyilwela Ishumi eliphambili kuGoogle kwimitya ekhuphisanayo yelizwi elinye okanye amabiniazizukufikeleleka ngokulula kuwe.
Pyiva lonto Ukuba undwendwela ezimbalwa kwaye ufumana umvuzo omncinci nge-AdSense kuya kufuneka uqale ulibale malunga nengeniso yakho kwaye ukhathazeke ngokwandisa inani labakhenkethi bemihla ngemihla. I-AdSense paradox iya kuphulukana nefuthe layo njengoko amanani akho esonyuka. Ingcebiso yam, kwaye endiyilandelayo kwezinye iisayithi zam, yile ungabandakanyi intengiso kwibhlog de ufike kubasebenzisi abangaqhelekanga be-1.000 bemihla ngemihla. Xa ufika kweli nani uya kuba sele ufikelele kwi-inertia ethile eya kukunceda ukuba ukhule kwaye nayo apha ngezantsi kweli nani lotyelelo ingeniso evela kwintengiso ayihlekisi Akufanelekanga ukuhlawula imiphumo emibi yokubandakanya intengiso malunga nezibonelelo zokwenza ngaphandle kwayo ngokupheleleyo.
Cisikhukukazi uyeke ukukhula ukwenza imali, uphulukana notyelelo lwento. Sukuwela kwi-AdSense paradox, Sebenzisa imigaqo-nkqubo yokusebenziseka kwiindawo zabo kwaye ugcine iindwendwe zabo. Lixesha lokuba kuvunwe oko kuhlwayelweyo. Imibuliso yeVinegary.
Ungaqhubeka nencoko kwibhlog ye UFricky!: Entsha…
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-AdSense kunye nokuSebenza. I-AdSense Paradox
Ndoda, ungumntu oqhekezayo, ndiyavumelana nawe kwinto yonke, ngamanye amaxesha sicinga kakhulu ngepasta ebalekayo kwaye silibale ukuba yintoni eyasikhokelela ekwenzeni ibhlog yethu, kufuneka siyiqonde into yokuba xa uqala ukwenza imali yonke into intle kakhulu, imali Ngokwenza into oyithandayo, ingxaki iza xa ingeniso iqala ukwehla kwaye sele ungasemva ukuba kutheni kwaye ungayisombulula njani endaweni yokuqhubeka nesingqisho esiqhelekileyo sebhlog. Kuya kufuneka uvuke, akukho mntu uba sisityebi ngale nto okanye bambalwa kakhulu abanyuliweyo abanokuphila kule nto, bonwabele ibhlog yakho kwaye njengoko uVinagre esitsho, abanye baya kuza.
Ewe, umngeneleli, ngemigca embalwa, uthethe into enye nam kwaye ungabandakanyekanga kangako 🙂
Izinto zokuqala kuqala, khula, ukhule, emva koko ukhule. Emva koko zama ukuphumelela into ukuba uyafuna, kodwa hayi ngaphambili.
Nam ndiyavuma ngamandla, intengiso inefuthe elibi kwaye ukuba uyiblogi encinci loo nto inyuswa ngabafundi abambalwa onabo.
Njengokuba umngeneleli esitsho, oku akuyi kwenza mali, ke okwangoku andizibhengezi. 😀
Utyelelo ezili-1000… Inyama. Inzima kakhulu.
Inyani yile yokuba andazi ukuba abathengisi bayayenza na imali kutyalo-mali lwabo lwentengiso. Andizifundi. Amehlo am atsibe iibhloko ze-adsense ngokuzenzekelayo. Nangona ukuhamba kwam ngebhlog kuzisa ingeniso kumniniyo ndonwabile ngaye. Kuhlala kuyinkuthazo elungileyo yokuqhubeka nokubhala.
Molo, ukungena okumnandi njengale ubukade uyiviniga ... ngokubhekisele kwinto ethethwa ngu-ivan, kusengqiqweni ukuba amehlo akhe atsibe-njengam kunye nabanye abaninzi- kwi-adsense ezenzekelayo, kuba ngamehlo e-blogger, kodwa xa ufumana utyelelo lwe-1000, I-100 iya kuvela kwamehlo ebhlogi kunye ne-900 evela kubasebenzisi beinjini yokukhangela, 'yesiqhelo' kwaye abatsiba ngokulula. Ihagi.
«Izinto zokuqala kuqala, zikhule, zikhule kwaye emva koko zikhule. Emva koko zama ukuphumelela into ukuba uyafuna, kodwa hayi ngaphambili. "
Andivumi ngaloo nto. Yintoni ebhlogger encinci ayifunayo, ngaphandle kokuqhubeka nokukhula, kukuba nomonde. Kule mihla into yokuqala yebhlog eqala ukuva kukuba unokufumana imali ngeAdSense ... kwaye uyahamba, uyazama.
Xa eqonda ukuba akunakwenzeka, uyishiya kwaye kunye neblogi. Ke ndicinga ukuba, ukuba unayo ibhlog encinci, beka kwa-AdSense efanayo, yiba nomonde kwaye ekugqibeleni uza kubona iziphumo.
Ndicinga ukuba yindlela yokwenza umonde kunye "nokunyamezela" ngebhlog ...
@ UVictor ulungile "oqhelekileyo" abasebenzisi abayiboni intengiso yomxholo njengathi. Nangona kunjalo, inani leendwendwe ezilumayo liphantsi kakhulu ngaphakathi kwelo qela.
@Cristian bueno Andifuni ukukuchazela ukuba andivumelani nento oyithethayo. Ukuba ibhlog incinci, kungcono ukuba ibe nkulu ngaphandle kokuthwala umthwalo wentengiso. Ngaphantsi kwe-1.000 lotyelelo ngemini musa ukuhlawulela unxibelelwano lwe-intanethi. Ndicinga ukuba kungcono ukwenza ngaphandle kwale mali ekuqaleni ukuya kwinqanaba apho uqala ukuphumelela kwangoko. Kum kufanelekile ukuba ulinde ngaphandle kwentengiso kwaye ngumonde wokwenene lowo.
Rafael monge sitsho
Andikholelwa kwi-adsense kwaye andikholelwa ukuba ibhlog yesiqhelo ihlala kuloo nto, amehlo am nawo ayatsiba ngokuzenzekelayo, kodwa akufuneki siyeke ukukholelwa ukuba hehehehe ndwendwela indawo yam ukubona ukuba bacinga ntoni ngendawo ye-adsense, imibuliso.
Phendula kuRafael Monge
Isiqalo esihle njengesiqhelo seVinegar. Umbuzo omnye ophakamayo, ngaba lolona manyano lubalaseleyo phantsi kwentloko? Ke ijongeka icacile kwaye abo bethu abayisebenzisayo abayicofisi, kodwa okusalayo kubonakala kakuhle, akunjalo?
Ukuphazamiseka kunomdla ngokwenene, kwaye kuyinyani, ngalo lonke ixesha ndibona ukuba ukungena kunqunyulwe yintengiso ndiyishiya ibhlog yam phantse ngaphandle ...
Ukubonakalisa kakuhle. Ndingongeza into, ndicinga ukuba kukho iibhlog ezinokucofa ngakumbi (ezipapashiweyo + ezinomxholo), umzekelo kwi-goponygo sithetha ngeefowuni eziphathwayo kwaye ngokuqinisekileyo zonke iintengiso eziphumayo ziyahambelana kakhulu nezihloko abathetha ngazo, yiyo loo nto kuqhelekile kumsebenzisi ukuba ucofa intengiso enexabiso elinomdla. Oku akusoloko kusenzeka kunye nomxholo wazo zonke iiblogi.
Ngendlela, i-mafia yayingathi ihlala isithi ngamampunge, phofu!
Okokuqala, enkosi ngokubhekisa kwisithuba sam esithobekileyo, njengawe, andizenzi ngathi ndingutitshala.
Ndibona umba we-adSense njengento ethambileyo. Kwelinye icala unenyani yokufuna ukufumana imali ngebhlog yakho, elungileyo kakhulu; Kwelinye icala, uxanduva olufumana ngabafundi bakho kunye nesidingo sokungalahli umbono wehorizon. Ukuzama "ukufihla" i-adSense yinto enokuthi ibonwe njengenkqubo yokukhohlisa kwaye ngokuqinisekileyo ayibonakali kum ukuba kufanelekile ukubeka intengiso kwibhlog engenakho nentshukumo eyamkelekileyo.
Ewe, xa ibhlog ikwisihloko esithile (njenge-Operator) kulula kakhulu kubasebenzisi ukuba bacofe kwintengiso kwaye inokubekwa kwibhloko eyahlukileyo ukusuka kumxholo, kodwa ngokuqinisekileyo andicingi ukuba «ukudibanisa» (ukuba ndibiza ngokuba "kukuzifihla") yinto ekwenza ubonakale ulungile; Kananjalo nokunika ukusetyenziswa kwentonga entloko.
Ndicinga ukuba uya kundinyanzela ukuba ndibhale enye iposti ngesihloko 😉
"Kum kufanelekile ukulinda ngaphandle koluntu kwaye ngumonde wenene."
Ndaye ndathula okwe glavu ... kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndicinga ngokubeka i-AdSense kodwa zininzi izinto ezinam ecaleni ...
Uff ungakanani intshukumo 😉
@rafael amehlo akho njengawo wonke umntu ophawula apha tsiba ngokuzenzekelayo, kodwa baninzi abangaziyo ukuba yintoni iAdSense okanye intengiso yomxholo.
@Tijeran indawo nganye inempawu ezenza indawo enye okanye enye. Ngayiphi na imeko, indawo engasentla yokusika ibalulekile xa ubeka intengiso.
@Operador xa ibhlog inamathela kwisihloko kwaye kukho ubhengezo obaneleyo malunga nayo, indibaniselwano ifikelela kwinqanaba eliphezulu kwaye ngokuqinisekileyo inzuzo (ukuba isihloko siyakuvumela) ukunyuka.
@Fricky! Ukuba yinyani kwaye unesibindi nesinye isithuba, kuya kuba kuhle 😉
@Christian uza kusixelela
Kubonakala ngathi ndizakuba ngowokugqibela ukugqabaza.
Ngokubhekisele kutyelelo olukhethekileyo lwe-1000, uhlobo lwebhlog kufuneka lucacisiwe, kuba iibhlog zokuzonwabisa okanye izifundo ezahlukeneyo ezinje ngezakho zindwendwelwe kakhulu. Kodwa iibhlog ezijolise kubhloga kunzima ukuzenza. Ngaphandle kokuba uthumele ama-3 okanye ama-4 ngamaxesha ngosuku kwaye uhluke kakhulu. Kodwa kunzima kakhulu. Ukongeza, uninzi lweebhlogger ezisakhasayo ngamanye amaxesha zingena ukuzama ukubhloga ngokuchanekileyo ukuphumelela into kwaye kukho enye into ephikisayo.Kwaye xa bengafumani mali ininzi bayadimazeka.
Umzekelo, kuye kwafuneka ndibeke i-adsense kwasekuqaleni phantse, kodwa ngoku andizukukwazi kwanto malunga nenkqubo esele ithethiwe okanye indlela yokuyisebenzisa, okanye ukubhala malunga nesihloko, okanye nantoni na.
@Rogelio into oyithethayo ngeebhlog eziqala ukwenza imali kwaye xa zingayenzi ziyayishiya ayisiyiyo paradox, sisizathu-siphumo. Yiyo kanye le nto ndicinga ukuba yimpazamo ukubandakanya intengiso kwasekuqaleni, abantu bajolise ekuphuculeni iAdSense yabo, kodwa kubani? Kundwendwela ama-200 ungenza into oyifunayo ukuba awuyi kusifumana nto, okanye ubuncinci kakhulu. Ngendlela, inani lotyelelo, njengoko usitsho, lihambelana nesihloko ngasinye, kodwa kukho iindlela zokutsala iindwendwe ngaphandle kwesihloko, kodwa oku kuthetha, njengoko usitsho, ukuzinikela kwaye ayinguye wonke umntu ozimisele ukukwenza.
@el Chavalin, ungcono kunaye nabani na (kwaye mna xa bendikhe ndandwendwela) uyakuyazi ukuba uthini ngasemva umthamo wezithuthi. Kum akukho kuthandabuza, uthathe isigqibo esifanelekileyo, okokuqala kufuneka ukhule kwaye emva koko uzame ukuphumelela.
Ndifana noChavalin. Ke andazi ukuba ndenze ntoni, nokuba ndiyisusa iAdsense okanye hayi. Ndiza kucinga ngayo, kodwa kuya kufuneka uvume ukuba unesizathu esithile.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bendiqale ibhlog yam kwaye kude kube yile veki ndingakhange ndibandakanye iAdsense kwibhlog yam, kwaye ndiye ndaqala ukukhangela izithuba kunye nezimvo malunga neAdsense kunye nendlela ekungafunekanga ndingene ngayo kwibhlog yakho ukuba bekukho nantoni na sathetha ngayo. Ungeniso oluhle kakhulu kwaye luyinyani.
UDDanny inyani kukuba ubandakanya intengiso encinci kakhulu kwaye kulungile ukuba "ungangcolisi" indawo kakhulu. Amathamsanqa.
Unyanisile, ndiqale ukuba yiblogi malunga nenyanga okanye eyadlulayo kwaye into yokuqala endiyenzileyo emva kokwenza ibhlog kunye nokubhala amagqabantshintshi okuqala, yayikukubandakanya intengiso yeGoogle adsense, ukuba akukho sibonelelo ukuza kuthi ga ngoku, yandinika ukuba ndisuse okwethutyana, iveki okanye edlulileyo kwaye inyani yile, ndiyayibona kakhulu ukuba ndiyibonile indlela utyelelo kwibhlog olonyuke ngayo, kwaye kubonakala ngathi sele ndinomfundi wemihla ngemihla.
Emva kwexesha ndiza kuzama ukuyifaka kancinci kancinci.
Sihlobo, kubonakala ngathi sisigqibo esikhulu. Ngethamsanqa kwaye ndiyathemba ukuba uza kukhula kakhulu. Okwangoku ndigcine ikhonkco lakho ukuze ndikutyelele amaxesha ngamaxesha.
Ndishiyeke nebinzana: "I-AdSense paradox ichaza ukuba ukufumana imali kufuneka sikhuphe kwibhlog yethu utyelelo ekunzima kakhulu ukulufumana."